သောမတ်စ်တူချယ်လ်က ချယ်လ်ဆီးအတွက် အမှန်ကန်ဆုံးသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မလား? – MySport Myanmar
သောမတ်စ်တူချယ်လ်က ချယ်လ်ဆီးအတွက် အမှန်ကန်ဆုံးသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မလား?
အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ တူချယ်လ်ကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းကနေ သူတို့ရဲ့ နည်းပြသစ်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ချိန်မှာ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ပတ်သက်သမျှ တူချယ်လ်နဲ့ပတ်သက်သမျှတွေအားလုံးကို လေ့လာမိခဲ့ရာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်အနေနဲ့ တူချယ်လ်က ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ကိုင်တွယ်မယ့်နည်းပြတွေထဲမှာ ပထမဆုံးသော ဂျာမန်လူမျိုးတစ်ဦး ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒီအချက်တစ်ခုက ဘာကြောင့်များ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေရလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ၁၉၉၆ခုနှစ်လောက်အထိ အသင်းရဲ့နည်းပြတွေအဖြစ် အင်္ဂလန်နဲ့ စကော့တလန်လူမျိုးတွေကိုသာ ဆက်တိုက်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ကာ ၁၉၉၆မှာပဲ နယ်သာလန်လူမျိုး နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမား ရုဒ်ဂူးလစ်က အသင်းရဲ့ ပထမဆုံးသော ဗြိတိန်ပြင်ပ နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွှက်ခဲ့ပါတယ်။ သူက အသင်းကို (၂)နှစ်နီးပါး ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်းက (၄၉)% ရှိခဲ့သလို သူရဲ့နောက်မှာ ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အီတလီလူမျိုးနည်းပြ ဗီအာလီကလည်း (၂)နှစ်တာကာလအတွင်း နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်းကို (၅၃)%အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအသင်းအတွက် ပထမဆုံးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ နည်းပြတွေထဲမှာ အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို(ပေါ်တူဂီ) ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးဖြစ်ပြီး တခြားနည်းပြတွေဖြစ်တဲ့ အေဗရန်ဂရန့်(အစ္စလ်ရေး) ဘင်နီတက်ဇ်(စပိန်) စကိုလာရီ(ဘရာဇီး)တို့ကလည်း အသင်းကနေသာ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်းတွေကတော့ (၅၀)%အထက်မှာပဲ ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းက နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်း ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ နည်းပြကိုတောင်မှ အသင်းအတွက် ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေ ရယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိရင် အလွယ်တကူ စွန့်လွတ်တတ်တဲ့ အသင်းဖြစ်လို့ ဒါက တူချယ်လ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေစေမှာပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း တူချယ်လ်က သူရဲ့နည်းပြဘဝကို တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်တတ်လာချိန်မှာ သူရဲ့နိုင်ပွဲရာခိုင်နှုန်းတွေရော အောင်မြင်မှုတွေပါ တိုးတတ်လာပါတယ်။ မနှစ်က ဘောလုံးရာသီမှာဆိုရင် တူချယ်လ်က ပီအက်စ်ဂျီကို အသင်းရဲ့သမိုင်းတလျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်အဆင့်ထိ ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့သေးတာက သက်သေပါပဲ။ ဝါနာ ဟားဗက်ဇ်တို့လို အသင်းရဲ့ ဂျာမန်ကစားသမားသစ်တွေ အသင်းမှာ အံ့မဝင်နိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ဂျာမန်လူမျိုး တူချယ်လ်က အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ချယ်လ်ဆီးအသင်း တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က တွက်ဆထားမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဂျာမနီနဲ့ ပြင်သစ်မြေမှာ အတွေ့အကြုံကောင်းများစွာ ရယူထားခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ပထမဆုံးသော ဂျာမန်လူမျိုးနည်းပြ တူချယ်လ်ဟာ အသင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့ စတင်ပြီး တွေ့မြင်ခံစားရတော့မှာပါ။
MySport Myanmar2021-01-27T05:10:44+06:30January 27th, 2021|All Posts, Football, Premier League|